The Voice Of Somaliland: Madaxddii Qaran oo caawa oodda laga rogay
Madaxddii Qaran oo caawa oodda laga rogay
(Waridaad) - Waxaa caawa oodda laga rogay madaxddii urrur siyaasaddeedka Qaran oo in mudo ahba ku xidhnaa jeelka Mandeera.
Amarkan oo ka soo baxay madaxtooyadda, ayaa maalmahanba laga hadal hayey dhamaan goboladda Soomaaliland ka kooban tahay. Sii daynta masuuliyeenta ayey xukuumaddu ka door biday inay fuliso xili shaq-badh ah si ay u hakiso soo dhawaynta dadweynaha, taasoo ifin karta taageeradda ummaddu u hayso urrur siyaasaddeedka Qaran, jaahwareerna galin karta xisbiga Udub.
Ilaa iminka wax fahfaahina lagama hayo xukuumadda Riyaale.
Kala soco wixii soo kordha halkan.
Posted by Ahmed Quick Ahmed Quick at Tuesday, December 18, 2007
See how badly Somali refugees are faring in the midst of xenophobia in Minnesota (the title of course is facetious):